​अपहरणमुक्त बालक भन्छन् – आधा घण्टा बाइक चढेपछि अपहरणकारीको कोठा पुगिन्छ | News Dabali
​अपहरणमुक्त बालक भन्छन् – आधा घण्टा बाइक चढेपछि अपहरणकारीको कोठा पुगिन्छ
July 31, 2017 | 7:04 pm
काठमाडौं/गएको बिहीबार अपहरणमा परेका एक स्कूले बालकको सकुशल उद्धार गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले पाँच दिनपछि सोमबार बिहान बालकको उद्धार गरेको हो । क्षेत्रपाटीको सरस्वती बोर्डिङ स्कूलमा युकेजीमा पढ्ने साढे पाँच वर्षका विशाल चौधरी अपहरणमा परेका थिए । अपहरणमुक्त उनलाई प्रहरीले सोमबार बिहानै परिवारको जिम्मा लगाएको छ । परिवारले बालकको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि अस्पताल लगेका छन् ।
अपहरणमा परेका बालक विजय चौधरीका छोरा हुन् । उनी सरस्वती बोर्डिङ स्कूलको यूकेजीमा अध्यनरत छन् । गएको बिहीबार सधैंजसो विशालका बाबु विजय छोरा लिन स्कूल जानुभएको थियो । सिसी टिभी फुटेज अनुसार विजय दिउँसो ३:४२ मा स्कूल पुग्नुभएको थियो ।
बाबु विजयले आफ्नो छोरा फेला पार्नुभएन । सिसी टिभीको फुटेज अनुसार बाबु आउनुभन्दा २ मिनेट अगाडि नै एक व्यक्तिले मोटरसाइकलमा विशाललाई लगेको स्कूलका प्रिन्सिपल सुमन मल्ल बताउनुभयो । ‘उहाँ ३ः४२ मा आउनुभयो, ३ः४० मै विशाललाई मोटरसाइकलमा राखेर लगेको सिसी टिभीमा देखिन्छ’ प्रिन्सिपल मल्लले उज्यालो अनलाइनलाई भन्नुभयो ।
बालक लैजाने व्यक्ति चिनजानकै हुनसक्ने सिसी टिभीमा देखिएको व्यवहारबाट देखिएको प्रहरीको अनुसन्धान छ । ‘नयाँ मान्छेसँग बालक त्यसरी सिधै झ्याम्एिर जाँदैन । परिचित मान्छे नै हुन् । बालकलाई मोटरसाइकलमा राखेर लगेको स्केचसम्म देखिन्छ । नम्बर देखिदैन’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी छविलाल जोशीले भन्नुभयो ।
बोर्डिङको सिसी टिभी फुटेज प्रहरीले लगेको थियो । घटना भएको डेढ घण्टामा महानगरीय प्रहरी वृत सोह्रखुट्टेको टोली पुगेको थियो । घटना अनुसन्धान गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने वृतका डिएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले प्रतिवद्धता जनाउनुभएकोे थियो । नभन्दै त्यसको पाँच दिनपछि बालकको सकुशल उद्धार भएको छ ।
कसरी भयो बालकको उद्धार ?
स्कूलको ड्रेसमै बिहीबार मध्यान्ह अपहरित भएका बालकको सोमबार बिहान ४ बजे सकुशल उद्धार भएको छ । सोमबार बिहान भक्तपुरको काँडाघारी क्षेत्रबाट बालकको उद्धार गरिएको हो । झिसमेस उज्यालोमा सडकमा एक्लै बालक चिच्याएको देखेपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
बिहान ४ बजे फेला परेका बालक विशाल नै भएको पुष्टि भएको हो । बालक भेटिएपछि परिवार प्रहरी सोमबार बिहानै परिवारको जिम्मा लगाएको छ । अपहरण भएको बेला स्कूले डे«समा भएका बालकको शरीरमा एकजोर नयाँ कपडा समेत भएको बालकको बुबा विशालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । ‘छोरो स्कूलको ड्रेसमा अपहरण भएको थियो । अहिले भेटिंदा नयाँ कट्टु र टिसर्ट छ’ बुबा विजयले भन्नुभयो ।
प्रहरीको खोजी कार्य तिव्र र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि अपहरणकारीले बालकलाई सडकमा छाडेको हुनसक्ने महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी प्रकाशजंग कार्कीले बताउनुभयो । तर घटना भने अझै रहस्यमै रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
के भन्छन् अपहरणमा परेका बालक ?
पाँच दिनपछि अपहरण मुक्त भएका बालक पहिलेकै अवस्थामा रहेको प्रहरी र परिवारले जनाएका छन् । उनको शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको छैन । कुनै किसिमको डर पनि नभएको बालकको बुबा विजयले बताउनुभयो । ‘घरमा राखेजस्तै खान मन लागेको कुरा दिन्थे । पाँच दिनसम्म एउटै कोठामा राखे’ बालकको भनाईलाई उद्धृत गर्दै बुबा विजयले भन्नुभयो ‘छोराको भनाइ अनुसार कोठामा अपहरणकारीका एक छोरा र एक छोरी छन् । आधा घण्टा जति बाइकमा चढेपछि अपहरणकारीको कोठा पुगिन्छ ।’
आखिर कसले किन गर्‍यो अपहरण ?
बालक अपहरण भएर अपहरण मुक्त भए पनि कसले किन अपहरण गर्‍यो भन्ने खुल्न सकेको छैन । अपहरणमा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्ति पक्राउ परेको भनिए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । घटनाको अनुसन्धान नसकिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
तर बालक र बालकका बाबुको भनाइले अपहरणकारी को हुन् भन्ने केही संकेत गरेको छ । अपहरित बालकका बाबु विजयको असनमा भाँडा पसल छ । बुटवलका विजयको रामेछापको खिम्तीका एक व्यक्तिसँग पुरानो चिनजान छ । उनीहरु दुईजना मिल्ने साथी हुन् ।
उनी काठमाडौंमा मार्बलको काम गर्छन् । उनीहरुको कोठामा पनि राम्रै ओहारदोहोर हुने गर्‍थ्यो । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । बालकको बयान अनुसार पनि अपहरण गरेर राखिएको कोठमा अपहरणकारीका एक छोरा र एक छोरी थिए । अपहरित बालक विशालको पनि उनीसँग चिनजान भएकाले सहजै स्कूलबाट उनीसँगै गएको हुनसक्ने सक्ने सिसी टिभी फुटेजमा पनि देखिन्छ ।
फिरौती माग्ने चलाखीका साथ बालकलाई अपहरण गरेको देखिन्छ । अपहरण गरेपछि मोबाइलबाट फोन गरी विजयसँग अपहरणकारीले ५० लाख रुपैयाँ फिरौती समेत मागेका थिए । त्यही मोबाइल नम्बरको आधारमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । अपहरणकारीका मुख्य नाइकेले आइतबारदेखि मोबाइल स्वीच अफ गरेर वेपत्ता भएका छन् । अपहरकारीका मुख्य नाइके काठमाडौंको बालाजु औधोगिक क्षेत्र र नारायणस्थानको मार्बल हाउसमा काम गर्थे । अहिले उनी काममा पनि जान छाडेको एक उच्च स्रोतले उज्यालो अनलाइनलाई बतायो ।
प्रहरी भन्छ – अपहरणकारी उम्कने ठाउँ छैन
अहिलेसम्म प्रहरीले बालक अपहरणको आशंकामा चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ । पक्राउ परेका चार जना अपहरणकारी मुख्य नाइके भनाउँदा मार्बलको काम गर्नेका आफन्त हुन् ।
उनीहरुमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै एसएसपी छविलाल जोशी केही बताउनु चाहनुभएन । उहाँले अपहरणकारी खोजी भइरहेको र उम्कने ठाउँ नभएको भन्दै छिट्टै पक्राउ पर्ने दाबी गर्नुभयो । उज्यालोबाट